यौन/स्वास्थ्य – ZoomNP
काठमाडौं, वैशाख १६– सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले अव दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावली संसोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । स्वास्थ्य जाँचका क्रममा लापरबाही गरेको भन्दै धरौटी रकम लिएर यसैबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने तयारी भैरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कानून मन्त्रालयमा नियमावली अन्तिम चरणमा रहेको र केहि दिन भित्रैमा संसदमा पेश गर्ने बताइएको छ । संसदबाट पास भएपछि नियमावली लागु हुनेछ । नियमावलि कार्यन्वयनमा आएपछि...
बिश्वका सेक्स सम्वन्धि अनौठा नियमहरू: कार्यालय समयमै सेक्स गर्न १ घण्टा विदा !
सेक्स मानव जीवनका लागि अति आवश्यकिय प्रकृया हो जसले सम्बन्ध र प्रेम दुवैलार्इ प्रगाढ बनाउछ । नेपालमा बिवाह अघिको सेक्सलाइ अवैध मानिन्छ ।
सेक्सकै विषयमा बिश्वमा यस्ता अनौठा अनोठा नियमहरू बनेका छन जो सुनेर तपाइ आफै तिन छक्क पर्नु हुन्छ । आउनुस सेक्सको बिषयमा बिश्वका अनौठो नियमहरू बुझौ ।
कतिपय देशहरूमा यस्ता पनि नियम छन जुन सुनेर जो कोहीपनि अचम्मित हुन सक्छन । हालै स्विडेनमा अचम्मको प्रस्ताव आएको छ ।जसमा सरकारी वा गैर सरकारी जुनसुकै कार्यालयमा काम गर्ने उमेर पुगेका नागरिकलार्इ सेक्स...
छोरा या छोरी के पाउने अब तपाइको हातमा: ९९% सफल यो बिधि अपनाउनुहोस् र चाहे अनुसार सन्तान पाउनुहोस्!
समाजमा छोरा या छोरी नजन्मिएकै कारण कैयौ परिवारमा द्वन्द्व हुने गर्दछन् । यसकै कारण कयै महिलाले मानसिक र शारिरीक यातना भोगिरहेका घट्नाहरु छन् । कतिपय महिलाले यसैको कारण सौता त कतिपयले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपरेका घटनाहरु भेटिन्छन् । कोही भने सन्तान प्राप्तीका लागि भएभरका अस्पताल, बैद्य, मठ–मन्दिर र तीर्थस्थलमा पुगेर सास्ती बेहोरिरहनु भएको त छैन ?
यदि त्यसो हो भने छोड्नु होस्, ती सबैखाले प्रयास । चिनियाँ बैज्ञानिकहरुले लामो समय र अनुसंधानपछि पत्ता लगाईएको यो प्रविधि ९९.९ प्रतिशत...
कतै तपाइको श्रीमतीले तपाईलाई धोका पो दिदैछिन कि? श्रीमानलाई धोका दिने ६ कारण यस्ता छन
पछिल्लो समय पारपाचुक गर्ने जोडी निक्कै बढेका छन् । हुन त मन नै नमिले पछि अलग्गिनु नै राम्रो हो । तर, श्रीमतीका तुलनामा धेरै श्रीमानहरुले श्रीमतीलाई धोका दिने गरेका छन् । त्यसो त श्रीमतीले श्रीमानलाई धोका दिदै नदिने भन्ने होईन । तथापी तुलनात्मक रुपमा श्रीमानले श्रीमतीलाई बढी धोका दिन्छन् । मैरिटल एण्ड फ्यामिली थेरापीले सन् २०१२ मा गरेको सर्वेक्षणका अनुसार २२ प्रतिशत विवाहित पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई धोका दिएका थिए भने १४ प्रतिशत पुरुष यस्ता थिए जसले श्रीमतीबाट धोका...
मान्छेको यौन जीवन राशी अनुसार फरक हुन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर हेर्नुहोस भिडियो कुन राशिका मान्छेले कसरि लिने गर्दछन यौन आनन्द? (भिडियो)
जानिराखौ: नि:सन्तान हुनबाट बच्न चाहनुहुन्छ? विर्य स्वस्थ राख्न आजै बाट त्याग्नुहोस यी ५ बानीहरु (जनचेतनाका लागि शेयर गर्नुहोस)
गर्भधारण गर्न नसक्दा अझै पनि महिलालाई दोष लगाउने मानसिकता पाइन्छ । तर बाझोपन हुनुमा महिला र पुरुष दुबै जिम्मेवार हुने गरेका विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । निश्चय नै आधुनिक जीवनशैलीले पुरुषको वीर्यको मात्रा र गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ । वीर्यलाई स्वस्थ राख्न त्याग्नुपर्ने ५ बानी यी हुन् :
अगाडिको गोजीमा मोबाईल राख्ने : धेरै पुरुषले आफ्नो सजिलो को लागि पाइन्टको अगाडिको पकेटमा मोबाईल राख्छन । तर यसले बीर्य निस्काशनमा असर गर्छ । मोवाईललाई जति पेल्बिसनजिक राखिन्छ स्वस्थ वीर्य...
के तपाइँ चुरोट पिउनुहुन्छ? अब घरेलु बिधिबाट घर मै बसेर यसरी सफा गर्नुहोस आफ्नो -फोक्सो (जनचेतनाको लागि शेयर गर्न नभुल्नुहोस)
चुरोट खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फोक्सोको समस्या हुनेगर्दछ । यदि तपाईले चुरोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ । तर घरेलु विधि प्रयोग गरेर ७२ घण्टाभित्र आफ्नो फोक्सो सफा गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो विधि सुरु गर्नुभन्दा पहिला दुग्धजन्य पदार्थहरुलाई आफ्नो भोजनबाट टाढा राख्नुहोला । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो किनभने दुग्धजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा फोक्सोमा भएका विषाक्त तत्वहरुलाई बाहिर फाल्न शरीरलाई गाह्रो पर्छ ।
घरेलु विधि प्रयोग गर्ने तरीकाः १. यो...
विज्ञानको चमत्कार: अप्रेसन देखि डराउनु हुन्न भने हेर्नुहोस कसरी पुरुष यौनांग निकालेर महिला यौनांग बनाइ लिंग परिवर्तन गरिन्छ ? हेर्नुहोस पुरा भिडियो
विज्ञानको चमत्कार: अप्रेसन देखि डराउनु हुन्न भने हेर्नुहोस कसरी पुरुष यौनांग निकालेर महिला यौनांग बनाइ लिंग परिवर्तन गरिन्छ ? हेर्नुहोस पुरा भिडियो https://youtu.be/Y1vKT4JEcDc...
ज्यान बचाउन जानिराखौ: झुक्किएर पनि नगर्नुस यी दुइ आसनमा यौनसम्पर्क नत्र भाँच्चिन सक्छ तपाइको यौनांग
हालै गरिएको एउटा अनुसन्धानले यौनको दुईवटा खास (पोजिसन) लाई अत्यन्त खतरनाक मानेको छ । अनुसनन्धानको दाबीनुसार डगी स्टाइल अर्थात पुरुष साथी पछाडी रहनु र महिला साथीलाई आफ्नो माथी (फिमेल अन टप) लिएर यौन सम्पर्क गर्नु अत्यन्त खतरनाक यौन आसन हो । ‘एडभान्सेस इन् युरोलजी’मा हालै प्रकाशितन अनुसन्धानअनुसार यो दुबै आसनमा पुरुषको लिंग भाँच्चिने सम्भावना सबैभन्दा बढी हुन्छ । अध्ययनको दाबी अनुसार विश्वभरीमा पुरुषको यौन अंगमा हुने आधाभन्दा बढी फ्याक्चर यौन सम्पर्कको समय महिला...
तपाइँको किड्नी खराब त हुँदै छैन ? थाहा पाउनुस्, यी १० लक्षणबाट (बच्ने उपाय सहित)
किड्नी मानव शरीरको निकै महत्वपूर्ण अंगमध्ये एक हो । यसले रगतलाई फिल्टर गरेर त्यसमा रहेका हानिकारक तत्वहरुलाई पिसाबको माध्यमबाट बाहिर पठाउने काम गर्छ । त्यसैले यसलाई कतिपयले मानव शरीरको फिल्टर पनि भन्छन् । गलत खानपान तथा औषधीको साइड इफेक्टले समेत किड्नी खराब हुन सक्छ । भारतीय (नेफ्रोलोजिष्ट) डाक्टर सञ्जय गुप्ता भन्छन्, ‘किड्नीको बिमारीको लक्ष्यण सुरुमा सहजै थाहा हुँदैन, सोही कारण यसलाई साइलेन्ट किलर पनि भन्ने चलन छ ।’
यद्यपी केही सावधानी अपनाउने हो भने समयमै किड्नी...
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का...
आज अलि आकस्मिक रुपमै संसदीय दलको बैठक आयोजना गरिरहेका छौं । आकस्मिक रुपमा यस कारण बैठक आयोजना गर्नु ...